Isikhukhukazi Sokuloba Esiwosiwe (Esinemifino Ekhiqiziwe!) - Ungadliwa
indlela yokwenza i-goulash ebhodweni le-crock
ungenza kanjani umnyuzi waseMoscow oneminti
ama-cookies ama-sitrobheli anezinhlamvu ezimhlophe zoshokholethi
Isikhukhukazi Sommbila Esosiwe
Izikhukhukazi ezigazingiwe zaseCornish noma “izikhukhukazi zemidlalo” yizinkukhu ezincane ezibhakwa kalula ukuze ziphelele — zimnandi ngempela!
Ufuna iresiphi kanokusho yomcimbi okhethekile ekhaya? Ngoba izinkukhu zemidlalo yaseCornish zincane kakhulu, azithathi isikhathi eside ukupheka kuhhavini! Luhlobo lwesidlo 'sokuyibeka bese uyikhohlwa' wonke umuntu azocabanga ukuthi ukhonzwe phezu kwalo!
Ngokufana nenkukhu eyosiwe, le iresiphi iyimbiza eyodwa, enenhliziyo enhle, nokho efana nesidlo sakusihlwa esilungele ukuhlala noma ukuba nenkampani ngaphezulu. Imifino ipheka eceleni kwenkukhu ukudla okuphelele epanini elilodwa.
Yini iChenish Game Hen?
Izikhukhukazi zaseCornish ziyinhlobo yezinkukhu ezithandwayo ezivela esifundeni saseNgilandi iCornwall. Cishe angamakhilogremu amabili ngokungafani nenkukhu ejwayelekile enesisindo esingamakhilogremu amane noma ngaphezulu.
Izikhukhukazi zaseCornish zivuthwe ngokuphelele ngesisindo esincane kanti inyama inamathenda amakhulu. Imvamisa zithandwa kunezinyoni ezinkulu ngoba kulula ukuzilungisa, futhi kuthatha isikhathi esincane ukupheka. Imvamisa ungabathola efrijini eduze kwamakhukhwe afriziwe.
Izithako / Ukuhluka
Ingxube elula yamafutha omnqumo namakhambi kunambitha isikhumba. Sebenzisa noma yimaphi amakhambi owathandayo (noma onawo).
Faka eminye imifino efana ne-butternut, i-acorn, noma u-squash we-zucchini! Hlela imifino ezungeze izikhukhukazi futhi uma sekuphekiwe, susa izikhukhukazi ugovuze imifino kuwo wonke ujusi omnandi wokunambitheka okwengeziwe!
Zama ukufaka ama-sprigs ama-rosemary amasha, i-thyme, noma i-oregano phakathi kwemifino noma ugcobe ingaphandle lesikhukhukazi ngentandokazi yakho ukuhlanganiswa kwesinongo ngesikhumba esihle kakhulu!
Ungayipheka Kanjani Isikhukhukazi SaseCornish
Kungazwakala kunzima, kepha lokhu kungenye yamadina amafenisha alula kunawo wonke!
Shayela izinkukhu ngamafutha nangesizini uma uthanda. Tuck amaphiko ngaphansi nyoni uyibeke epanini. Hlela imifino ezungeze izikhukhukazi zommbila.
Bhaka, kuvuliwe ngokwendlela yokuthola iresiphi ngezansi.
Susa izikhukhukazi kuhhavini bese ume ngaphambi kokuphaka.
ICEBISO LOKUSEBENZA: Ukuze uthole isikhumba esibucayi, faka izikhukhukazi ngaphansi kwe-broiler kuze kube yilapho isikhumba siphenduka nsundu ngokusagolide bese siba mnandi!
Ongakusebenza Nesikhukhukazi SaseCornish
Le recipe isivele iyinto eyodwa eyenziwe, kepha uhlangothi noma imijikelezo emibili yokudla bese igcina ukugxila kokungenile!
Sithanda ukwenza ezinye isinkwa saseFrance esizenzele ngokukhipha noma imaphi amajusi amnandi bese ufaka ukuphonsa okulula isaladi noma isaladi le-caesar .
Amathiphu wesikhukhukazi se-Perfect Cornish
Ukuze uthole imiphumela emihle, gcoba usawoti embotsheni yezikhukhukazi ukuze ukhiphe umswakama omningi ngenkathi usosa, lokhu kusiza nokuthambisa inyama kancane.
Ama-sprigs ambalwa wamakhambi amasha noma ucezu kalamula angafakwa nasemgodini.
Uma ugcina i-bacon grease, lena indlela ephelele yokufaka amafutha we-bacon esikhundleni samafutha omnqumo, engeza olunye ungqimba olucashile lwe-flavour!
Ithiphu ebaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi inkukhu iphekwe ngokuphelele kepha ayiphekwa ngokweqile. Lapho isikhukhukazi sisusiwe kuhhavini, faka ithemometha yenyama engxenyeni eshubile yesifuba kude namathambo bese uqinisekisa ukuthi umoya wangaphakathi ngu-165 ° F.
Inyama Emningi Nemifino
Inkukhu Esheshayo Yenkukhu Nemifino - Isikhathi sokupheka semizuzu engama-30
I-Crock Pot Beef Stew - Isitsha sezinkanyezi ezi-5
Ishidi Pan Inkukhu YesiGreki - isidlo se-pan eyodwa
IHamburger Casserole - kuyashesha futhi kulula
Inkukhu yaseRosemary eyosiwe - ngemifino emisha
Ngabe umndeni wakho uyithandile le recipe ethosiwe yeCornish Hen? Qiniseka ukuthi ushiya amazwana nesilinganiso ngezansi!
Isikhathi sokulungiselelaamashumi amabili imizuzu Isikhathi Sokupheka55 imizuzu Isikhathi sokuphumula10 imizuzu Isikhathi Esiphelele1 ihora 25 imizuzu Izinkonzo4 UmbhaliUHolly Nilsson Isikhukhukazi Sommbila Esosiwe sinethenda, sinamanzi futhi sinambitheka kamnandi! Umndeni wonke uzothanda lesi sidlo esilula! Phrinta Phina
▢ezimbili izikhukhukazi zommbila cishe amakhilogremu ayi-1.5 lilinye
▢3 wezipuni Amafutha e-Olive ihlukaniswe
▢½ isipuni usawoti we-kosher noma ukunambitha
▢½ isipuni i-rosemary eyomile ochotshoziwe
▢½ isipuni ulamula
▢¼ isipuni amaqabunga e-thyme
▢¼ isipuni impuphu kagalikhi
▢1 iphawundi amazambane oqoshiwe
▢ezimbili izaqathe oqoshiwe
Hlangisa i-ovini iye ku-450 ° F.
Phonsa imifino nge-1 isipuni samafutha omnqumo kanye nenkathi ngosawoti & pepper ukunambitha (engeza amakhambi angeziwe uma ungathanda).
Hlanganisa izipuni ezimbili ezisele zamafutha omnqumo namakhambi esitsheni esincane. Shayela izinkukhu ngomxube wamafutha omnqumo. Hlanganisa amaphiko ukuze ungene ngaphansi kwenyoni.
Beka izikhukhukazi esitsheni esikhulu se-casserole noma ebhodini lokubhaka elinerimmed. Hlela imifino elungisiwe ezungeze ama-hends ne-palce kuhhavini. Nciphisa ukushisa kuye ku-400 ° F.
Bhaka imizuzu engama-55-65 noma kuze kufike lapho izinkukhu zifinyelela ku-165 ° F nge-thermometer kanti imifino ithenda. (Qinisekisa ukuthi i-thermometer ayithinti ithambo.)
Susa kuhhavini ubeke itende ngokukhululeka ngemizuzu eyi-10 ngaphambi kokusika.
Sika izikhukhukazi phakathi usebenzisa isikere sasekhishini bese ukhonza.
Amakholori:568,Amakhabhohayidrethi:6g,Amaprotheni:39g,Amafutha:42g,Amafutha agcwalisiwe:10g,Cholesterol:227mg,I-Sodium:450mg,Potassium:669mg,Umucu:1g,Ushukela:3g,Uvithamini A:5338IU,Uvithamini C:5mg,I-calcium:41mg,Insimbi:ezimbilimg
Igama elingukhiyeIsikhukhukazi SaseCornish, Ungosa kanjani isikhukhukazi sommbila, Isikhukhukazi Sokosa Esiwosiwe, iresiphi yesikhukhukazi esosiwe saseCornish InkamboInkukhu, isidlo sakusihlwa, i-Entree, i-Main Course KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .